कोरोना हटस्पट काठमाडौं उपत्यकामा कस्तो छ संक्रमणको फैलावट? - Halkara News
कोरोना हटस्पट काठमाडौं उपत्यकामा कस्तो छ संक्रमणको फैलावट?
हल्कारान्यूज २७ आश्विन २०७७, मंगलवार १९:१९ 628 पटक हेरिएको
काठमाडौं । मंगलबार काठमाडौं उपत्यकामा थप २ हजार १२९ व्यक्तिहरुमा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भयो। देशभर ३ हजार ५५६ जना संक्रमित थपिँदा उपत्यकाकै त्यसको आधा भन्दा बढी संक्रमित भएको यहीँ तथ्यांकले देखाउँछ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार मंगलबार (आज) देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या ३५ हजार ९१५ पुग्दा काठमाडौं उपत्यकाका मात्रै २० हजार ९१७ जना रहेका छन्। अर्थात् कूल सक्रिय संक्रमितको ५८.२४ प्रतिशत काठमाडौं उपत्यकाकै रहेका छन्।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार काठमाडौं जिल्लामा आज सक्रिय संक्रमितको संख्या १६ हजार ८७६, ललितपुरमा २५८७ र भक्तपुरमा १४५४ रहेको छ।
त्यस्तै जिल्लागत रुपमै हालसम्म संक्रमित हुनेहरुको संख्या काठमाडौंमा ३७ हजार ३८२, ललितपुरमा ५१५१ र भक्तपुरमा ३६६७ रहेको छ। यसरी हालसम्म काठमाडौं उपत्यकामा मात्रै ४६ हजार २ सय व्यक्तिहरु कोरोना भाइरस संक्रमित भइसकेका छन्। जब कि देशभर हालसम्म १ लाख १५ हजार ३५८ जना संक्रमित भएका छन्। यसरी हेर्दा झण्डै आधा संक्रमितहरुको संख्या उपत्यकामै देखिन्छ।
कम छैन निधन हुनेको संख्या पनि
काठमाडौं उपत्यकाभित्र कोरोना संक्रमणबाट निधन हुनेको संख्या पनि कम छैन। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार आज (असोज २७) सम्मको देशभरको तथ्यांक हेर्दा कोरोना संक्रमित ६६३ जनाको निधन भइसकेको छ। त्यसमध्ये २१३ जना काठमाडौं उपत्यका भित्रकै रहेका छन्।
जिल्लागत रुपमा काठमाडौंमा सबैभन्दा धेरै १४२ जना, ललितपुरमा ४१ जना र भक्तपुरमा ३० जनाको कोरोना संक्रमणबाट ज्यान गइसकेको स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्यांकले देखाउँछ।
भेन्टिलेटर र आइसीयूमा रहेका बिरामी पनि धेरै उपत्यकामै
स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रा.डा. जागेश्वर गौतमले नियमित प्रेस ब्रिफिङमा बताएअनुसार मंगलबार देशभर ६६ जना भेन्टिलेटरमा र ३०७ जना आइसीयूमा राखेर उपचार गराइरहेका छन्।
भेन्टिलेटरमा रहेका ६६ जनामध्ये ५३ जना र आइसीयूमा रहेका ३०७ मध्ये १२९ जना काठमाडौं उपत्यकामै उपचार गराइरहेका छन्। जब कि काठमाडौं उपत्यकामा अहिले सरकारी अस्पतालमा आइसीयू १२२ र निजीमा ११७ गरी २३९ वटा रहेका छन् भने भेन्टिलेटर सरकारी अस्पतालमा ६७ र निजीमा ४० गरी १०७ वटा मात्रै रहेका छन्।
काठमाडौं उपत्यकामा भेन्टिलेटर १०७ वटा मात्रै रहँदा ५३ जना कोभिड–१९ कै बिरामी रहेका छन्। बाँकी ५४ वटा भेन्टिलेटरमा अरु प्रकारका बिरामीहरु हुन सक्छन्। यदि कोरोना संक्रमितहरुको अवस्था बिग्रिदै गए भेन्टिलेटर नै नपाउने अवस्था देखिन्छ। २३९ आइसीयूमध्ये १२९ मा कोभिडकै बिरामी रहेका छन् भने ११० आइसीयूमा अरु खालका बिरामी होलान्।
यही अवस्थालाई ध्यानमा राखेर स्वास्थ्य मन्त्रालयले सोमबार मात्रै आकस्मिक बाहेकका अप्रेसनहरु नगर्न सरकारी तथा निजी दुवै अस्पतालहरुलाई निर्देशन नै गरेको थियो।
उपत्यकामा कसरी बढ्दैछ कोरोना ?
स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार ठीक तीन महिना अघि असार २७ गते काठमाडौं उपत्यकामा ३ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको थियो। आज तीन महिनापछि असोज २७ गते २१२९ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ।
काठमाडौंमा संक्रमणको दर कुन रप्तारमा छ भन्ने हेर्नलाई यहाँ केही तथ्यांक हेरौं–
असार २७ मा ३ जनामा देखिएको कोरोना संक्रमण १७ दिनसम्म १० जनाभन्दा तल नै देखिन्छ। तर १८ औं दिन अर्थात् साउन १३ गते ५३ जनामा संक्रमण पुष्टि भयो।
त्यसको १० दिनपछि साउन २३ गते उपत्यकामा कोरोना संक्रमितको संख्या ३ अंकमा उक्लियो। त्यस दिन १०६ जना संक्रमित थपिए। यसरी तीन अंकमा उक्लिएको कोरोना संक्रमण दर तीन दिन लगातार दुई अंकमा झरे पनि साउन २७ बाट फेरि तीन अंकमै उक्लियो र त्यसको वृद्धिदर १० मा होइन, १०० मा बढ्न थाल्यो।
साउन ३२ मा १७२ मा संक्रमण पुष्टि भएयता तीन अंकमै रहेको संक्रमणदर असोज १६ मा ४ अंकमा उक्लियो अर्थात् त्यसदिन उपत्यकामा मात्रै १६३८ जनामा संक्रमण पुष्टि भयो। यो क्रम अहिलेसम्म जारी छ। असोज १६ यताका हरेक दिन काठमाडौं उपत्यकामा संक्रमित थपिने दर १ हजारभन्दा तल झरेको छैन।
यहीँ तथ्यांक हेर्दा मात्रै पनि काठमाडौं उपत्यकामा कोरोना संक्रमणको फैलावट कस्तो छ भन्ने प्रष्टै देखिन्छ।
हेर्नुहोस् उपत्यकामा कोरोना संक्रमणको फैलिदो तस्बिर (स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्यांक चार्टमा)
प्रधानमन्त्रीको नियुक्तिमा संविधानको धारा
संविधानको धारा उल्लेख नै